(TALKZIMBABWE) Zim has highest literacy rate in Africa: UN | Maravi
(TALKZIMBABWE) Zim has highest literacy rate in Africa: UN
ZIMBABWE has the highest literacy rate in Africa, according to the latest United Nations study. The UNDP Statistical Digest shows Zimbabwe ahead of all African countries and taking over from Tunisia which held pole position for years with Zimbabwe second-best and number one in Sub-Saharan Africa.
Zimbabwe’s literacy level currently stands at 92 percent, up from 85 percent while Tunisia remains on 87 percent. This is despite the country’s education sector suffering from the effects of lack of funding blamed on illegal Western sanctions on Zimbabwe.
Labels: EDUCATION, LITERACY, TEACHERS, ZIMBABWE
MMD’s Chalwe found with case to answer in journali...
Chona cites the pitfalls of exploitation, corrupti...